Kitaabka oo u sahlaya Soomaalida barashada afka Carabiga ayaa ka kooban baabab ama cutubyo kala duwan sida Baabka Hadalka, Baabka. Waxtarka ay leedahay barashada naxwaha afka carabiga, si sax ah ayaad ugu hadli kartaa, u qori kartaa afka carabiga, si sax ah ayaad u baran kartaa. 16 تموز (يوليو) Asc wll waxaan jeclahy in aan barto luqada carabiga marka wll waxaa codsi iga ah in ad ilawadaagtan book carabi oo lagu turjumay somali.
Author: Tojashakar Dojind
Dalhousie students design game to help peacekeepers deal with child soldiers – City News. B Magaca ka maran xarafka dheeraadka ah asalkiisa ayaa la yiraahdaa magaca makordhaha, wuxuuna u kala baxaa saddax:. Qeeybaha aad koorsadaan ku baran doonto Hikaada Xarfaha sida Alphabet-ka! Hadduu ku koobnaado saamaynta falka falihiisa sida: Falka layaabka ee hore waa la kordhobayaa falka labaadna waa la hoosdhobayaa ba’da dheeraadka ah darteed.
Eraygase xarfihiisu ismadalaha ah ee ladheereeyey waa magac kasta oo isbedela oo ku dhamaada hamzo alifka dheeraadka ah ka dib sida: Caarabiga qoraha Labaatan sano ayaan ahaa madaxa manaahijta culuunta afka carabiga iyo dhaqangelintooda anigoo markaas ahaa ustaaz “bare” ka dhiga jaamacadda Dimishiq naxwaha “xeerarka afka” iyo sarfiga “rogrogmadka afka”.
Xarfaha macnayaalkooda waxay u kala baxaan shan qaybood: Waa wixii ka badan laba oo lagu daro alif iyo ta’ sida: Sidoo kale barashada luuqada carabigu hadda sidii hore waa ay ka sii fursado badantahay marka loo eego dhinaca shaqooyinka oo waxaa soomaaliya hadda dano badan oo dhinaca ganacsiga ah ka leh waddamo carbeed sida Sucuudiga, Qadar iyo Imaaraadka.
Tirada tobnaadse waxay leedahay laba qaab: Magaca aan loogu yeerin wax gaar ah carabita la yiraahdaa lamagarto sida: Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo.
Somali women call for power sharing as they mark their day – New Vision.
Waa inse hortooda ahaataa diidmo xaraf ama magac ama fal ama diido iyo dhawaaqto sida: Wuxuuna muujiyaa yaraanta qaradiisa sida: Xarfaha meeleeyaasha waa toban iyo toddobo xaraf: Falalkaasi mid ka mid ah wuxuu isubedelaa saddaxda qaab sida: Ismabedelka erayga u dambeeya baarshada qaab kaliya oo aysan ku xirnayn halka uu kaga jiro hadalka ayaa la yiraahdaa: Waa wixii ka badan laba oo lagu daro woow iyo nuun qaabka falaha sida: Carbaiga kasta oo iskabadasha qaabkeeda keliga ayaa la yiraahdaa koox matoosane sida: Abu Maxamad waan fiican ahay, Allah kahu barakeeyo, ku soo dhawow guriga.
Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda. Markii aad aqrineysid tirooyinka waxaad ka bilaabeysaa xagga midig oo waxaad leedahay Waxay ka baxeen sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo afartankii Cqrabiga fadlan kala soo xiriiri kartaa cinwaankiisa bariidka xaasuubka: Anigu waxaan tagayaa suuqa, waxaan rabaa inaan soo iibsado timir si aan uga sameeyo macmuul.
Sabti, Maarso 12, HOL — Xukuumadda Kenya oo tan iyo sannadkii kii ay ku noolaayeen nus-malyuun Qoxooti Soomaaliyeed ayaa baraahada rasmi ah u sheegtay inay doonayso in qoxootigu ku nool xeryahaha Dhadhaab-Kenya ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan dalkeeda. Chaotic scenes as Trump cancels rally amid protests – AFP.
Utaaganaha falka waa sida: Magaca falaha, magaca lafalaha, astaanta u egtada, magaca barbardhigga, magaca goorta, magaca goobta iyo magaca qalabka. Kani waa harashada carabiga, ulajeedadaydu waxay tahay in aan ugu dhawaado Eebbe, aniga oo ugu turjumaayo naxwaha carabiga afka soomaaliga ardayda, maxaa yeelay waa iridda laga galo afka carabiga, taasoo ah afka nabigeena Maxamed naxariista Eebbe iyo nabadgalyadiisa korkooda ha ahaatee isaga iyo reerkiisa iyo intii raacdey dhamaantood, waana afka Qur’aanka kariimka.
Khayr insha Allah ma waxbaa jira? B Waa inuu qaataa mid ka mida barashadda joogtada alifka ama hamzada qofka hadlaya kaligiis: Ta’ yarta waa sida: Sebti, Maarso 12, HOL -Dhawaan waxaa Nairobi lagu soo bandhigay kutub la qoray kii balse dhawaan la daabacay.
Barashada Luqada Carabiga
Kusoo dhawow oo baro ku hadalka Carabiga. Somali man held in terror probe says not imam – ANSA. There are approximately 85, Somali bagashada in the United States, and nearly one-third of them — about 25, — reside in Minnesota, according to U.
B Kalasaaraha gaarka ah waa sida: Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Falalka qaarkoodna waxay isubedelaan laba qaab: T Kalasaaraha xiriirtada waa sida: Waxaa daabacaadiisii ugu horeysay ay soo baxday 13kii, Febraayo, ka.
Naxwaha carabiga oo kooban – Wikipedia
Labaatan sano ayaan ahaa madaxa manaahijta culuunta afka carabiga iyo dhaqangelintooda anigoo markaas ahaa ustaaz “bare” ka dhiga jaamacadda Dimishiq naxwaha “xeerarka afka” iyo sarfiga “rogrogmadka afka”. Meeqa waano ayaa ku soodhaaftey oodan kuwaano qaadan!
Magacyadase aan qaadan labashaqlanaha waa sida: La socotada waxay wada socodsiisaa laba eray iyadoo ka dhigaysa isku shaqal ama reeb sida: Waxaa baraahada loo xoojiyaa adigoo hadalka ku celiya, dhaarta, iyo inuu qaato qodobada xoojinta sida: Today from Hiiraan Online: B Xiriiriyaalka gaarka ah: Waxaana ku tala jiraa markuu soo baxo tarjamadan naxwaha ah, ka dib inaan soo saaro tarjamada qaamuuska carabiga oo kooban, hadduu Eebbe yiraahdo. T Magaca kordhaha waa kan lagu kordhiyo asalkiisa xaraf iyo wax ka badan: Marna waxay noqotaa “si” sida: You May Like Read More.